Apple waxay soo saari kartaa baytariyadeeda u gaarka ah Apple Car iyo kuwo kale | Waxaan ka socdaa mac
Xanta ku saabsan jiritaanka a baabuur ay samaysay tufaax iyo astaantooda gaarka ah, gabi ahaanba korontada, iyagu waa shatiyado oo way nala socdeen bilihii la soo dhaafay iyaga oo leh xoog ku filan. Waqtigan xaadirka ah ma naqaano cida sameyn karta gaariga laftiisa, laakiin waxa aan si cad u heyno ayaa ah in isbedelku uu yahay in shirkada lafteeda ay soo saarto qeyb ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay si loo yareeyo qarashka isla markaana loo xakameeyo tayada. Sidan oo kale xan cusub ayaa tilmaamaysa in shirkadda Californian waxaad samayn kartaa batariyaal kuu gaar ah.
Apple ayaa hadafkeedu yahay inay soo saarto baytariyada loo adeegsan doono gaarigooda ismaamulka ee dalka Mareykanka. Halkii aad ka heli lahayd alaab-qeybiyeyaasha dalalka kale, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday DigiTimes.
Apple ayaa sida muuqata ka fiirsaneysa inay baytariyada Apple Car ku sameyso Mareykanka. Waxay la shaqeyn kartaa shirkado reer Taiwan ah halkii ay ka ahaan lahayd Shiinaha. Sida laga soo xigtay ilaha warshadaha. Taiwan-fadhigeedu yahay Foxconn ama Advanced Lithium Electrochemistry (Aleees), kaas oo waxay qorsheynayaan inay warshado ka aas aasaan Mareykanka, waxay leeyihiin fursad ay kula shaqeeyaan Apple baytariyada baabuurta
Apple ayaa la sheegay inay raadineysay inay la shaqeyso labada shirkadood ee ugu badan ee keena batteriga Shiinaha, CATL iyo BYD. Si kastaba ha noqotee, ku adkaysiga Apple ee adeegsiga baytariyada uu Mareykanku ku sameeyay baabuurkeeda ayaa ka dhigaysa ururada noocaas ah kuwo u muuqda kuwo aan macquul ahayn Taasi had iyo jeer sida laga soo xigtay ilaha lala tashaday iyo ku dhawaaqaya Macrumors. Sidoo kale, warbixintu waxay sheegaysaa in Foxconn, oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Apple keena, iyo Advanced Lithium Electrochemistry ay qorsheynayaan inay dhir ka aas aastaan ​​dalka Mareykanka, halkaasoo laga soo saari karo baytariyada "Apple Car".
Ma garanayno goorta dhammaan wararka xanta ah ee ku saabsan Apple Car ay dhab ahaan dhaqan galayaan.Waxa iska cad in ay abuureyso farxad. Laga soo bilaabo isla xilligii ay u soo boodday adduunka fikrad ahaan iyo illaa iyo xilligan qiimaha, waxay noqon kartaa aaladda Apple ee aadka loo filayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay soo saari kartaa baytariyadeeda Apple Car iyo kuwo kale
Midabyo cusub oo loogu talagalay xargaha maqaarka ee AirTags iyo xargaha